XFCE စီမံကိန်း - သင်၏ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကို OpenCollective သို့ပြောင်းရွှေ့ပါ Linux မှ
ကတည်းက XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းသည်လက်ရှိရှိပြီးသားများအနက်အသက်အကြီးဆုံး၊ လူသိများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်သတိထားမိသည် သတင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်း။ နှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ "XFCE စီမံကိန်း" ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းယူဆောင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်လုပ်ဆောင်သောအဆင့်များကိုရည်ညွှန်းသည် "XFCE စီမံကိန်း" ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တွဲဖက်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပိုကောင်းတဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖို့, ဆိုလိုသည်မှာ, ပိုကောင်းသင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု ဘဏ္contributionsာရေးပံ့ပိုးမှုများကို။
ဒီသီချင်းကိုအပြည့်အဝမလေ့လာခင်၊ မကြားဖူးတဲ့သူတွေကိုသတိရဖို့ယုတ္တိရှိတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စာပေများအရအောက်ပါတို့သည်။
"ပွင့်လင်းမြင်သာသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အွန်လိုင်းငွေကြေးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့်စုဆောင်းရရှိသောဘဏ္ancesာငွေများကိုမျှဝေရန်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းများ (ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများစသည်တို့) အတွက်၎င်းတို့၏ ၀ င်ငွေများနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစီမံကိန်းများ၊ ၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့လိုသူများအကြားငွေကြေးကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာစုဆောင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။" Open Collective and Anartist - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များ
အရင်းအမြစ် - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအတွက်ရန်ပုံငွေပလက်ဖောင်း
1 XFCE စီမံကိန်းနှင့် OpenCollective ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ
1.1 XFCE စီမံကိန်းသည်၎င်း၏ဘဏ္ancesာရေးတိုးတက်စေရန်မည်သည့်အဆင့်ကိုလုပ်ခဲ့သနည်း။
XFCE စီမံကိန်းနှင့် OpenCollective ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ
အောက်ပါအရသိရသည် link ကို del 30 2021 မေလကပို့သောအီးမေးလ်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည် Kevin bowen, un ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ၏အလုပ်အဖွဲ့၏ XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင်အောက်ပါလူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံခဲ့သည်
"XFCE စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် OpenCollective သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခုထည့် ၀ င်ငွေများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ (ယူအက်စ်) နှင့်ယူရို (ယူရို) တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သင်အလှူငွေထည့်လိုပါကအောက်ပါတို့ကိုလေ့လာပါ link ကို အသေးစိတ်အတွက် ယခုလအစောပိုင်းက Xfce သည်ဘဏ္contributionsာရေးအထောက်အပံ့များကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် bountysource.comသူကပူးပေါင်းခဲ့သည် OpenCollective.com အနာဂတ်မှာသင့်ရဲ့ဘဏ္ancesာရေးစီမံခန့်ခွဲရန်။ ဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်, ဒီအခြားအတွက်အကျဉ်းချုံးဖြစ်ပါတယ် link ကို."
"ထို့အပြင် XFCE စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည်စုပေါင်းအဖွဲ့နှစ်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။Xfce'and'xfce-eu'' အသီးသီး။ PayPal၊ SWIFT ငွေလွှဲခြင်းနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာရှိလှူဒါန်းမှုများနှင့်ငွေကြေးလှူဒါန်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်း Xfce-eu စုပေါင်းအဖွဲ့သည် SEPA လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်များကို သုံး၍ ယူရိုငွေဖြင့်ငွေပေးငွေယူများအားလုံးကိုစီမံခြင်းနှင့်စီမံခြင်းကိုတာဝန်ယူသည်။"
"အပြောင်းအလဲအတွက်အခကြေးငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် XFCE စီမံကိန်း၏ဘဏ္contributionsာရေးပံ့ပိုးမှုများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် Open Collective သည်ငွေပေးချေမှုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ လစဉ်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ငွေလွှဲမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ bountysource မှကျန်ရှိသောရန်ပုံငွေများကို OpenCollective ဘဏ္hostsာရေးနှစ် ၀ န်ကြီးနှစ်ခုအကြားလာမည့်လကုန်တွင်လွှဲပြောင်း။ ဖြန့်ဝေမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းရည်မှန်းချက်များ၊ ဘတ်ဂျက်များနှင့်အပိုဆောင်း OpenCollective အင်္ဂါရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ကြေငြာချက်များရှိနိုင်သည်။"
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" မကြာသေးမီကအကြောင်း NOTICIAS တာဝန်ခံအဖွဲ့ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် «Proyecto XFCE» ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တွဲဖက်။ ထွက်သယ်ဆောင်သည်သူ၏ခြေလှမ်းများအကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပိုကောင်းတဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖို့, ဆိုလိုသည်မှာ, ပိုကောင်းသင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု ဘဏ္contributionsာရေးပံ့ပိုးမှုများကို; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » XFCE စီမံကိန်း - သင်၏ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကို OpenCollective သို့ပြောင်းပါ
Cinnamon 5.0 သည်မှတ်ဥာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်မှုများ၊ အစိတ်အပိုင်းတိုးတက်မှုများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်